Kukadzi 21, 2018 arun
The MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 Index akafumbira pa 9,250.01 aine pfuma 0.88% nokuti zuva.
Panguva yokunyorwa, ari Bitcoin mutengo agara $11,098 representing a loss of 2.4% mu wokupedzisira 24 maawa. Inopfuura $ 1.8B zvemadhenari BTC vaipanana muna BTC / USD pamusika anomirira 27.6% mugove yose vhoriyamu daily. The BTC / JPY peya anomirira 42.5% mugove.
The Ethereum mutengo aregedza 5.4% mumakore 24 maawa uye pari zvino agere kuruoko $887, pamwe pamusoro $ 400M zvemadhenari raEta vakatsinhanisa kare 24 Maawa pamusoro paEti / USD peya iro rine 29.5% musika mugove daily zvokutengeserana vhoriyamu.
Venezuela Inoti Petro kuti Pre-Sale yamutsa $735 miriyoni
Venezuela akazivisa kuti pre-kutengeswa cryptocurrency yayo kunotsigirwa mafuta-, asi Petro, akaita kukwezvwa $735 miriyoni pazuva rokutanga. Hurumende rave zvakabudisa mutengi kuti Chinyorwa uye akasimbisa kuti vatengi vacho vanogona kushandisa mari zvakaoma uye cryptocurrencies, but not bolivars. The Superintendent of Cryptocurrencies, Carlos Vargas, stated:
“The presale uye Initial Coin Kutsinhira vachaitwa mune mari dzakaoma uye cryptocurrencies, asi kwete Bolivars. basa redu iri kuisa Petro ari yakanakisisa maoko uye ipapo pamusika yechipiri vachaonekwa.”
South Korea kuti Tsigirai 'Normal’ Crypto Trading
South Korea appears to be softening its stance on cryptocurrency trading. According to Yonhap News, Choe Heung-sik, gavhuna Financial Supervisory Service, vakati hurumende “achatsigira cryptocurrency kutengesa kana kwomuzvarirwo kwema dzinoitwa.” According to BusinessKorea, mukuru mukuru wehurumende nechokuita rakapotsa mari basa simba akati:
“Tiri chokwadi kufunga kuitwa kuchitsinhanisa kufarirwa hurongwa sezvo okuwedzera murau pamusoro cryptocurrencies. Tiri ungangotarisa chiero muenzaniso pamusoro State of New York kuti anopa mvumo anyatsosarudza [nokuti Exchange akavhiyiwa].”
RMIT University anotangazve Australia Wokutanga Blockchain Course
RMIT, wokuAustralia pachena tsvakurudzo yunivhesiti, wakatanga kurwisa yunivhesiti yokutanga Blockchain kosi Australia raMwari, according to Business Insider Australia. The 8-week course, chakanzi "Kuumba Blockchain Strategy", ndiye akasika RMIT kuti Blockchain Innovation Hub uye ishamwari Consulting zvakasimba Accenture uye fintech nomusimboti Stone & choko. Jason Potts, mutungamiriri Blockchain Innovation Hub, akaudza Business Australia Insider:
"Ndicho chimwe chezvinhu izvozvo apo munhu wose yakawanda yakasiyana ruzivo vaungana kupa nayo kushanda. Zvakawanda Chokwadi ichi rakagadzirirwa kubatsira Executives uye vatungamiriri mabhizimisi kunzwisisa kwete sei ichi chitsva Michina mabasa, uye kunzwisisa chii chaizvoizvo shure kwayo, asi sei hunoratidza mienzaniso zvebhizimisi uye mabhizimisi nzira. "
By Crypto Enzanisa Market Analysis Report 21.02.2018
Previous Post:The Blockchain-rakapiwa R3 anosika ane muzinda dzidzo kuti magweta.
Next Post:The Developers akazivisa Hardcore ari blockchain Dogecoin rokutanga
comprar criptomonedas anoti:
Kukadzi 27, 2018 pa 8:18 PM
Kurume 2, 2018 pa 10:50 AM
Beatris Neiswander anoti:
Kurume 7, 2018 pa 4:43 PM
Chau Wassman anoti:
Kurume 9, 2018 pa 5:05 AM
Kurume 10, 2018 pa 7:07 AM
Maude Mcmurtry anoti:
Chivabvu 23, 2018 pa 11:21 AM
Caryn Trego anoti:
Chivabvu 29, 2018 pa 6:38 AM